ရှမ်းပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသွားရောက်စစ်ဆေးမှုခရီးစဉ်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာချာလီသန်းသည် (၃၀.၉.၂၀၂၁) ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ရှိ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးသို့ လာရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ရာ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(SME)၊ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးနှင့် ဝန်ထမ်းများမှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြပါသည်။ ထို့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမှူးမှ ဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကိုတင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လိုအပ် သည်များကို လမ်းညွှန်မှာကြား၍ နေ့လယ်(၁၄:၁၅) နာရီတွင် အမှတ်(၂) သံမဏိ စက်ရုံ(ပင်းပက်)သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါခဲ့ပါသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းဆွေသည် (၂၉. ၉. ၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနသို့ စစ်ဆေးရန်အတွက် သွားရောက်ခဲ့ရာ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး၊ ဌာနကြီးမှူးများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခရီးစဉ်တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြရန်အတွက် လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နေ့လည်(၁၆:၀၀)နာရီတွင် အေးသာယာ၊ ထုံးဖိုရှိ တောင်ကြီးခရိုင်စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ (၃၀.၉.၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၄:၄၅)နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများအပေါ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး၍ လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။
“စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုတွင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအားပေးရန်၊အထူးသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကိုအခြေခံသည့်ပြည်တွင်းရှိSMEများကိုအားပေးဆောင်ရွက်ရန်”ဒေသထွက်ကုန်များအားပေးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍MSMEလုပ်ငန်းများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ကိစ္စများအားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်“ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များအားပေးမြှင့်တင်နိုင်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ”ကို(၃၁.၅.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့၊ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းရှိ MSME Center၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသောSMEလုပ်ငန်းရှင်များမှ Packaging သင်တန်းဖွင့်စေလိုခြင်း၊ FDA လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေလျော့ပေးစေလိုသည့် အချက်များ၊ Business Matching များ ပြုလုပ်ပေးစေလိုမှုနှင့် Packaging ပြုလုပ်သည့် ပလတ်စတစ်အိတ်၊ အလှအိတ်များအား နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများမှ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ရေးဆောင်ရွက်စေမှုအခြေအနေများ စသည့် အချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊မြန်မာနိုင်ငံရေထွက်ပစ္စည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတာဝန်ရှိသူများ၊မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန်ထုန်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းမှတာဝန်ရှိသူများ၊ရေထွက်ပစ္စည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၊စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၊သစ်သီးဝလံဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ၊နှင့်စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံထုတ်ကုန်MSMEလုပ်ငန်းရှင်စုစုပေါင်း(၅၀)ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဘားကုဒ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် MSME လုပ်ငန်းများအတွက် ဘားကုဒ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကိုOnline Virtual (Zoom Meeting) ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘားကုဒ်အသင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာ MSME များ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသော ဘားကုဒ်နံပါတ်များကို MSME များမှ သိရှိနိုင်ပြီး စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ဘားကုဒ်ဆိုင်ရာ အသိပညာဆွေးနွေးပွဲကို (၁၉.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့နံနက် (၁၀း၃၀) နာရီမှ (၁၂း၃၀) နာရီအထိ Online Virtual ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး ဦးဝင်းဦးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဘားကုဒ်အသင်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဒေါ်အိဇာခြည်သွင်မှ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့်ဘားကုဒ်နံပါတ်များအကြောင်း နှင့် GS1 ဘားကုဒ်နံပါတ်များ လျှောက်ထားခြင်းအား ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် MSME များမှ အမေးအဖြေကဏ္ဍများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး စုစုပေါင်း (၁၂၃)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။
ENABLING DIGITAL TRANSFORMATION FOR MYANMAR SMES DURING COVID-19" ဆွေးနွေးပွဲ
2021-01-15 General News
အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီ (US-ASEAN Business Council)မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် SME Webinar Series in Response to COVID-19 Crisis, "Enabling Digital Transformation for Myanmar SMEs during COVID-19" ဆွေးနွေးပွဲကို (၁၅.၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့ နေ.လည် (၁၃း၃၀)နာရီမှ (၁၆း၀၀)နာရီထိ Online Zoom Meeting ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းSME Webinar Series in Response to COVID-19 ဆွေးနွေးပွဲသို့ US - ASEAN Business Council ၏ ဒု-ဥက္ကဌ၊ ဒေသဆိုင်ရာ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သံအမတ်ကြီး Amb-Michael W. Michalak၊စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းရဲပိုင်ဟိန်း ၊ UMFCCI ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းတို့မှ အဖွင့်အမှာစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ပထမပိုင်းတွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်အေးအေးဝင်းမှ Government Measures for SMEs in Response to COVID - 19 &amp; Myanmar SMEs Policy Outlook for Post COVID-19 - COVID - 19 ကုစားရေးအစီအစဥ် CERP ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ CERP Action Plan တွင် ပါဝင်သည့် Goal (၇)ချက် အနက် တစ်ချက်ဖြစ်သည့် MSME များ မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးပန်းတိုင်ရောက်အောင် မည်သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်း၊ ချေးငွေဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများနှင့် အတိုးနှုန်းလျှော့ချပေးမှုများ၊ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း MSMEs များ Digital အသွင်ပြောင်းရေး နိုင်ငံတော်မှ စီမံဆောင်ရွက်ထားချက်များ စသည့်အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမင်းမင်းမှ Digital နည်းပညာအသွင်ပြောင်းရေးနှင့် SME များအတွက် Digital ကုန်သွယ်ရေးနှင့် E-commerce အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဒုတိယပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခိုင်ရွှေဝါမှ SME များအတွက် ငွေစက္ကူလွတ် ဒီဂျစ်တယ်နည်းနှင့် ငွေပေးချေမှု၏ အရေးပါပုံ၊ SME များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ငွေချေစနစ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဌာန မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးရန်နောင်စိုးမှ Myanmar's Digital Payment Platform and Cyber Security အကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။Thailand and Myanmar, Mastercard မှ Country Manager - Mrs. Aileen Chew , Mastercard Project Manager ဒေါ်ခင်ခင်မြတ်သူလှိုင် တို့မှ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ Digital စနစ်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ခြင်းအကြောင်းများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် US-ASEAN Business Council ၏ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ ဦးလှဘုန်းမြင့် (ခ) Jack Myint မှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ လုပ်ငန်းရှင် (၁၀)ဦးအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှ စုစုပေါင်း လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
BASELINE SURVEY ON MYANMAR MSME’S DIGITAL UTILITY SURVEY ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ခြင်
2020-12-17 General News
“မြန်မာနိုင်ငံ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ (DEDC) ၏ လမ်းညွှန်မှုအရ ဂျာမနီနိုင်ငံ Friedrich Naumann Foundation ၏ကူညီပံ့ပိုးပေးမှု၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် မင်းမြန်မာ သုတေသန ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ MSME ဌာနမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှု (Baseline Survey On Myanmar MSME’s Digital Utility 2020) တစ်ရပ်ကို Face to face အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ခြင်း”မြန်မာနိုင်ငံ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှမဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်(၆)ရပ် ချမှတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင်စီးပွါးရေးကဏ္ဍများ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာစနစ်ကူးပြောင်း၍ထိရောက် စွာ အသုံးချနိုင်မှု ၂၀% ၊ ၂၀၂၅ခုနှစ်တွင် ၅၀ % အောင်မြင်ရန်ရည်မှန်းထားပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဒီဂျစ်တယ် အသုံးပြုမှု ဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် အညွှန်းကိန်းတို့အားလက်ရှိမြေပြင်တွင်တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့အား ဖော်ထုတ်၍ လိုအပ်သလိုသုံးသပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် Digital Economy Development Committee(DEDC) တို့၏ ဦးဆောင်မှု၊ စီစဉ်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် Baseline Survey on Myanmar MSME’s Digital Utility Survey အား သုတေသနပြု စစ်တမ်းကောက်ယူရန် မင်းမြန်မာ သုတေသန ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Min Myanmar Research-MMR) အား တာဝန်ပေးအပ်ကာ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းလေ့လာမှု သုတေသန အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်(၁၅) ခုရှိ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း(၂၅၀၀) ခုအား တယ်လီဖုန်း/ Online Channel ဖြင့် မင်းမြန်မာ သုတေသန ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ Survey Team မှလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပေါင်း(၂၅၁) ခုအား စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ MSME ဌာန ဝန်ထမ်းများမှ Face to faceဆက်သွယ် တွေ့ဆုံ၍ လည်းကောင်း မေးမြန်းကာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းစစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းအားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ MSMEဌာနအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှ msmeလုပ်ငန်းရှင် (၆၀)ဦးအား Face to face Survey ကောက်ယူရမည်ဖြစ်၍ (၂၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ (၁၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိmsmeလုပ်ငန်းရှင်(၆၀) ဦးအားကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာ၍ social distancing နှင့်အညီ တွေ့ဆုံခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီအချိန်ခွဲခြားချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတို့ဖြင့်Face to face Survey အောင်မြင်စွာကောက်ယူပြီးစီးခဲ့ပါသည် ယခုလို covid-19 ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ် အသုံးပြုမှု ကျယ်ပြန့် လာသည့်အတွက် MSME လုပ်ငန်းများ လက်ရှိ ဒီဂျစ်တယ် အသုံးပြုမှု အခြေအနေကို ယင်းစစ်တမ်းမှ ဖော်ထုတ် ပြီး လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သလို အထောက်အကူပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယင်းစစ်တမ်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီဖြေဆိုပေးခဲ့ကြသောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအားဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြသော MSME ဌာနမှဝန်ထမ်းများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
FOOD HYGIENE MANUAL FOR FOOD PROCESSOR ထုတ်ဝေနိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့
Food Hygiene Manual for Food Processor ထုတ်ဝေနိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ (၁၆.၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် Japan International Cooperation Agency (JICA) တို့ပူးပေါင်း၍ Food Hygiene Manual for Food Processor ထုတ်ဝေနိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုဆွေးနွေးပွဲကို Virtual Meeting ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဒေါက်တာအိရွှေစင်ထွန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ နည်းပညာနှင့်ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာနမှ ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် Food Hygiene Manual for Food Processor အတွက် Food Experts များထံမှ အကြံဥာဏ်ရယူလို၍ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ Manual ကိုထုတ်ဝေရခြင်းမှာ Promoting Investment for Enhancing Industrial Competitiveness in Myanmar Project (2020-2024) အရ Industrial Development Plan for Food Processing Industry of Myanmar စီမံချက်ကို ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်း၊ စီမံချက်အရ Policy Support, Material Processing Industrial Development Textile Industry စသည်တို့ကို Action Point (၁၂) ခု ဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Enhancement of Technical Guidance to Food Processing Industry ဟူသည့် Action Point အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာရှင်များအနေဖြင့် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး၍ Food Processors များအတွက် ပြည့်စုံသော Manual အဖြစ် ထုတ်ဝေနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ Food Expert များဖြစ်ကြသော အစားအသောက်နှင်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရီရီမြင့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာအေးငြိမ်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဥမ္မာစိုးဝင်း၊ Myanmar Association of Chemical Engineering ၏ ဥက္ကဌ ဦးစိန်သောင်းဦး၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာန၏ ဌာနမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိုးစိုးသန်း၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဓာတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ပညာရှင် ဒေါက်တာချိုချိုလွင်၊ Food Science &amp; Technology Association Myanmar ၏ဥက္ကဌ ဒေါ်တင်ဆွေအေး၊ ပညာရှင် ဒေါ်စီစီဝင်း၊ Time Business Service Co.,Ltd ၏ Director, Business Consultant ဦးနေဇော်ထွန်းတို့မှ Manual တွင် ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းသင့်သည့် Water Quality, Waste Management, Pest Control, Storage &amp; Transport, Food Defense, Training &amp; Awareness, Definition, Dllustration , Glossory များအကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ JICA အဖွဲ့အစည်းမှ Mr.A. KoYaMa, Mr.Kazuhiro Okamato, ဒေါ်ရွှေစင်ထွန်းရီနှင့် ဒေါ်မေရီမြင့်ဇွန်တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပညာရှင်များ၏အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များအား လက်ခံရေးဆွဲပေးမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာသို့လည်း ပြန်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပညာရှင်များမှလည်း ထပ်မံသုံးသပ်အကြံပြုဆွေးနွေးပေးစေလိုပါကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
2020-12-16 General News
ဗဟိုအသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီများ၏လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းဗဟို အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အေဂျင်စီနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီတို့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ (၂:၃၀)အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)နှင့် SME Center (ရန်ကုန်)နှင့် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတို့တွင် Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ဗဟို MSME အေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး၊ MSME အေဂျင်စီ တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဒေါက်တာမင်းရဲပိုင်ဟိန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးသပ်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ အသင်း(နာယက) ဦးခင်မောင်ကျော်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အသီးသီးရှိ Regional MSME Agency များ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော် များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် MSME အေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ COVID ကာလအလွန်တွင် MSME လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား Regional MSME Agency များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ (နေပြည်တော်)/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအလိုက် ရေးဆွဲခဲ့သော Action Plan များ အပေါ် ဦးစားပေး ထုတ်ကုန်ကဏ္ဍနှင့် ဦးစားပေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ကာ Pilot Project များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး၊ MSME လုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုလျှင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် MSME Agency ရုံးများ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် အဆိုပါ ရုံးများတွင် One Stop Service ပေးနိုင်ရေး၊ MSME လုပ်ငန်းများရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ပေးရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် များထဲမှ e-commerce နှင့် Digital နည်းပညာကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ သုံးစွဲလာနိုင် စေရေး၊ SME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေအရ MSME မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိစ္စရပ်များအား ဒေသဆိုင်ရာ MSME Agency မှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး၊ စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော MSME လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဗဟို MSME Agency နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ MSME Agency များ ပူးပေါင်း၍ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး စသည်တို့အား ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် MSME အေဂျင်စီ တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းရဲပိုင်ဟိန်းမှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် Covid-19 အလွန်ကာလတွင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ Myanmar Economic Resilience and Reform Plan (MERRP) ကို ရေးဆွဲလျက်ရှိသောအခြေအနေများနှင့် MERRP ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် CERP, MERRP နှင့် MSDP တို့၏ မဟာဗျူဟာ များကို တစ်ပြိုင်တည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး၊ New Normal အခြေအနေတွင် MSME Agency ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကဏ္ဍကို Normalထက် ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ (နေပြည်တော်)/ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် Incubation Center များ တည်ထောင်နိုင်ရေး၊ အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား နိုင်ငံတွင်း/ဒေသတွင်းရှိ Supply chain သို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် Regional MSME Agency များမှ ဒေသအလိုက် ရေးဆွဲခဲ့သည့် Regional MSME Action Plan များအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ တွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအား ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသများမှလည်း မိမိတို့ဒေသ အလိုက် ဆောင်ရွက်လိုသည့် အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါအစည်း အဝေးသို့ ဗဟို အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသများမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်‌တော်များ စုစုပေါင်း (၈၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး MSME လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒေသအလိုက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များအား ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
THE 10TH MEETING OF THE ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON MICRO, SMALL AND MEDIUM (ACCMSME) AND RELATED MEETINGS ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
2020-12-10 General News
The 10th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium (ACCMSME) and Related Meetings ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း (၁၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ (ACCMSME) အစည်းအဝေး နှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများကို ASEAN Secretariat of ACCMSME မှ ဦးဆောင်၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက် မှ (၉) ရက်နေ့အထိ Video Conferrence Meeting ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ACCMSME တွင် Focal အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာန၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ၊ ဦးအောင်မျိုးခိုင် ဦးဆောင်၍ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ မှ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးများ တွင် ASEAN Strategic Action Plan (2016-2025 ) အရ အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်းရှိ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများ ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် စီမံကိန်းများ ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများ နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ACCMSME ၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ASEAN Secretariat တို့ မှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ သို့ သဘောထားမှတ်ချက်များ တောင်းခံခြင်း နှင့် ACCMSME နှင့် ပူးပေါင်း၍ MSME များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသော (GIZ, Canada-OECD , US-ABC , iBAN , UNESCAP ,Google ) နှင့် ASEAN plus Three နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တို့မှ MSME များ အတွက် ဆက်လက်ပံ့ပိုးမည့် အခြေအနေများကို တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်များ မှ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေ များ အား ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြ၍ အစည်းအဝေး ကို (၉) ရက်နေ့ ၊ ညနေ (၅ : ၀၀ ) နာရီ တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
RBF Myanmar fifth Call for Proposal Awareness Event Online Webniar သတင်းစဉ်
RBF Myanmar fifth Call for Proposal Awareness Event Online Webniar သတင်းစဉ်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အစီအစဉ်တွင် မြန်မာ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြိုင်ဆိုင်မှုပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်နှင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အပြုအမူ ကောင်းများ တိုးမြင့်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍ Responsible Business Fund (RBF) Project ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စီမံကိန်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် RBF Myanmar တို့ပူးပေါင်း၍ Responsible Business Fund (RBF) Project ၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲ၌ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်အေးအေးဝင်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း ( Myanmar Substainable Development Plan-MSDP) ကို ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ MSDP တွင် မဏ္ဍိုင် (၃) ရပ်နှင့် ပန်းတိုင်(SDG) (၅) ချက်ပါဝင်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သံယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသဖြင့် ပန်းတိုင် (၅) တွင် အဆိုပါအချက်အား ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားပါကြောင်း၊ ဤဦးစီးဌာနအနေဖြင့် MSME လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် MSME ပြပွဲပြိုင်ပွဲများတွင်လည်း MSDP နှင့်အညီ Criteria များ သတ်မှတ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ MSME Master Plan ရေးဆွဲရာတွင်လည်း MSDP နှင့်အညီ ရေးဆွဲထားပါကြောင်း၊ ယနေ့ခေတ်တွင် စားသုံးသူများအနေဖြင့် Food Safety ကို ဦးစားပေးလာကြကြောင်း၊ ထို့ပြင် ရေဆိုးများစွန့်ပစ်ခြင်း၊ အနံ့ဆိုးများထွက်ပေါ်နေခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းမှု မရှိခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများကိုလည်း တိုင်ကြားမှုများရှိလာပြီး စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာသဖြင့် ပိတ်သိမ်းရသည့် စက်ရုံများ လည်းရှိပါကြောင်း၊ တိုင်ကြားမှုများမရှိသော်လည်း အချို့သောစက်ရုံများမှာ လေလွင့်ပြုန်းတီးမှုများ များပြားနေသဖြင့် Substainable Development မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ MSME များအနေဖြင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော Smart ဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ MSME များအတွက် လိုအပ်နေသော ကဏ္ဍများကို ကူညီပေးသည့်အတွက် RBF ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် RBF Myanmar ၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mr.Amarnath Reddy က အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် RBF Project မှ လေးကြိမ်မြောက်အထိ အဆိုပြုလွှာများခေါ်ယူ၍ ငွေကြေး အထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ 4th Call သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလွှာများ ခေါ်ယူ သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စီမံကိန်းပြီးဆုံးမှာဖြစ်သည့်အတွက် 5th Call တွင် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှသာ လျှောက်ထားစေလိုပါကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ရွေးချယ်မခံရသည့်လုပ်ငန်းများအတွက် နစ်နာပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စီမံကိန်း Idea အသစ်များရှိပါက RBF နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးနိုင်မှ စစ်ကိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ RBF Project မှ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ ရရှိထားသည့် လုပ်ငန်းများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် RBF Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူများက RBF ၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ၊ 5th Call တွင် ထောက်ပံ့ပေးမည့် ဧရိယာများ၊ ထောက်ပံ့ပေးသည့်ငွေပမာဏနှင့် ရာခိုင်နှုန်း၊ လျှောက်ထားနိုင်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် လျှောက်ထား ရမည့်အဆင့်များ၊ အချိန်ကာလနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသော လုပ်ငန်းရှင်များမှ သိရှိလိုသည်များကို RBF Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၊ RBF Myanmar မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mr.Amarnath Reddy နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ စုစုပေါင်း (၃၀၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
RESPONSIBLE BUSINESS FUND(RBF) အကြောင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော အစိမ်းရောင်လုပ်ငန်းများအဖြစ်သို့ ဦးတည်သောSustainable Production နှင့်Responsible Business Fund(RBF) အကြောင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ World Wide Fund for Nature-WWF (သဘာဝစီမံကိန်း)နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ Responsible Business Fund (RBF) တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော အစိမ်းရောင် လုပ်ငန်းများအဖြစ်သို့ ဦးတည်သောSustainable Productionအကြောင်း အသိပညာပေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့တွင်Online Conference အဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဒေါ်အေးအေးဝင်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံရှိMSME လုပ်ငန်းများအား ကုလသမဂ္ဂ၏ Sustainable Development Goals(UNSDGs) များနှင့် အညီ ရေရည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များ (Sustainable Production) အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရမှထောက်ပံ့သော Responsible Business Fund (RBF) အား ရယူနိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုပြည့်ဝသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်လာစေရေးစသည်တို့အား ပြောကြားခဲ့ပြီး သဘာဝစီမံကိန်း မန်နေဂျာ Mr. Ujjwal Pokhel မှ သဘာဝစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ Clean Production Consultant၊ Energy Efficiency Consultant၊ RBF Myanmar၊ Banking Expert စသော မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် စွမ်းအင်ခြိုးခြံ ချွေတာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ RBF ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်းနှင့် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော အချက်များ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း အသီးသီးရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ စားသောက်ကုန်ထုတ်MSME လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း (၁၃၀)ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး Responsible Business Fund (RBF) ထောက်ပံ့ငွေ လျှောက်ထားနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များအား မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
လုပ်ငန်း (၆၉၈) ခုသို့ ခွင့်ပြုငွေ ပမာဏ ကျပ် (၂၂.၇၆၈၅) ဘီလီယံကို ချေးငွေ ထုတ်ယူခွင့်ပြု
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရCoronavirus Disease 2019 (COVID-19)ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်(၁၁/၂၀၂၀)၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်၁။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁၀/၂၀၂၀) ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ချေးငွေလျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအနက် ပူးတွဲပါ လုပ်ငန်း(၆၉၈) ခုသို့ ခွင့်ပြုငွေ ပမာဏ ကျပ် (၂၂.၇၆၈၅) ဘီလီယံကို ဒုတိယအကြိမ်COVID-19 Fundမှ ချေးငွေ ထုတ်ယူခွင့်ပြု လိုက်ပါသည်။၂။ အဆိုပါ ချေးငွေထုတ်ယူခွင့် ရရှိသူများအား ဘဏ်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ချေးငွေထုတ်ပေးရာတွင် ဘဏ်တစ်ခုခု၌ တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ချေးငွေများ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။